लोकमानले गर्भनर नेपाललाई समेत असिना–पसिना बनाए,अब के होला ? – YesKathmandu.com
लोकमानले गर्भनर नेपाललाई समेत असिना–पसिना बनाए,अब के होला ?
बिहीबार ११, कार्तिक २०७३
काठमाडौं । एनसेलको लाभांशसम्बन्धि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंककका गभर्नर चिरञ्जिवि नेपाललाई चिटचिट पसिना आँउन थालेको छ ।
गभर्नर नेपालले अख्तियारका निलम्बित प्रमुख कार्कीकै निर्देशनमा एनसेललाई लाभांश बिदेश लैजान दिएको आरोप लागेको छ ।
यसरी,उनी सो काण्डमा मुछिन पुगेसँगै अख्तियारले रकम (लाभांश) बिदेश लैजान दिएको आधार र कारणसहितको जवाफ दिन तीन दिने म्यादसहितको पत्र राष्ट्र बैंकलाई काटेको हो ।
अख्तियारले राष्ट्र बैंकसहित नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र उद्योग विभागलाई पनि पत्राचार गरी यस बारेमा अनुसन्धान्न अगाडि बढाएको छ ।
अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की उक्त पदबाट निलम्बन भएपछि अख्तियारका निमित्त प्रमुख दिप बस्न्यातको निर्देशनमा एनसेलको लाभांश प्रक्रिया छानविन सुरु गरिएको थियो ।
झण्डै १० करोड चुक्ता पूँजी देखाएको एनसेलमा बैधानिक प्रक्रियाबाट लगानी नआएको र सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर पनि नतिरेको भन्दै त्यस कम्पनीको लाभांश लैजान उद्योग बिभागले रोकेको थियो ।
तर राष्ट्र बैंकले भने एनसेलले ईजाजत पत्रमा तोकिएका सबै प्राबधानहरु पालना गरेको जानकारी उद्योग विभागबाट प्राप्त भएकाले नै लाभांस लैजान नरोकेको बताएको छ ।
अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने–राष्ट्र बैंक, दुरसञ्चार प्राधिकरण तथा उद्योग विभागलाई आवश्यक कागजपत्र र जानकारी तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेका छौ । ती निकायहरुबाट प्राप्त सूचनाहरुका आधारमा आयोगले छानबिन अगाडि बढाउछ ।
यता, अख्तियारको पत्र पुगेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलको लाभांस लैजान दिने विषयमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको स्पष्ट पारेको छ । यस्तो खबरहरु सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले हतारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणको सहमतिपछि लाभांस लैजान दिने निर्णय गरेको दाबी गरेको थियो ।
‘म जुन दिशातिर ढल्केपनि देशकै हितमा गर्छु’
प्रचण्ड, देउवा र माधवकुमार नेपालको घरमा भारतीय राजदुत रञ्जित रेको ‘देउसी’
१० बर्षमा २५ लाख पर्यटक भित्राउने सरकारी लक्ष्य
ज्ञानेन्द्र शाह दुइ घण्टा आमासँग
टेलिकमको विनियमावली संशोधन
‘सात सालको म्यान्डेट पूरा गरौँ’
सांसदहरुद्वारा प्रधानमन्त्री दाहाललाई लोकमान बचाउने राजनीतिकर्मीलाई बाहिर ल्याउँन माग
स्थानीय चुनाव हारेपछि देउवाको जिल्लामा पार्टीभित्र ठूलो विवाद
२० ओभर सकिँदा युगान्डाको ३ बिकेटको क्षतिमा ५३ रन, पारसले गरे ह्याट्रिक
लोकमानसिंह कार्की माथि अदालत भित्रै कालोमोसो दलियो
माओवादी केन्द्रले छान्यो पाँच मन्त्रीको नाम, को नेता के मन्त्री बन्दैछन ?
नेपाल महिला संघको तेस्रो महाधिवेशन अन्तिम चणमा
पाँच वर्ष अगाडिको काण्ड व्युँताइएसँगै तनावमा झलक खनाल
आचारसंहितालाई लाचारसंहिता बनाए यी मान्यहरुले
क्यान्सर उपचारका लागि आगामी आइतबार सुजातालाई सिंगापुर लगिदै
खानेपानी मन्त्रालयमा दोहोरियो आइजिपि काण्ड, पहिलो र दोस्रो पाखा तेस्रोलाई निर्देशक !
खुमबहादुरको आक्रोस: देउवाको पनि खुट्टी देख्दै चाल पाइयो
एमालेले टुंग्यायो जिल्ला समन्वय परिषदका उम्मेद्धार, को कहाँबाट बने उम्मेद्धार ?